Ọgwụ akpụzi, Ọgwụ na ịkpụzi, Plastic akpụzi Maker China
Ebu ọganihu ajụjụ-ERP
Okwu Mmalite ka HKY
Machine na ngwá
Automotive jụrụ usoro
Automotive n'ime ime
Electronics ụlọ ọrụ
Product imewe ndu
Tọrọ ntọala na 2005, HKY akpụzi bụ otu n'ime ndị kasị asọmpi ịgba ntụtụ ebu emepụta na Ọgwụ na ịkpụzi ụlọ ọrụ Shenzhen, China. Anyị na-ejere a dịgasị iche iche nke ọrụ tinyere akpakanamde interiors, akpakanamde jụrụ usoro, ngwá electronic, home ngwa, ọgwụ na ahụ ike, ike, na ulo oru na ndị ọzọ.
Nye Ọgwụ ebu na Ọgwụ na ịkpụzi ọrụ
HKY akpụzi, ntụtụ ebu Chian ụlọ ọrụ, na-enye gị ihe kasị mma ngwọta maka omenala Ọgwụ kpụrụ akụkụ na Ebu
Professional China omenala Ọgwụ ebu na ịkpụzi ụlọ ọrụ na IATF-16949 asambodo na ERP management usoro
Anyị bụghị naanị Nlụpụta Ebu na kpụrụ akụkụ n'ihi gị, ma na-ike-enye akụkụ imewe, plating, sere, na ihuenyo-ebi akwụkwọ na ndị ọzọ na n'ichepụta metụtara ọrụ.
Anyị na-kwara na huu quality na afọ ojuju nke ndị ahịa anyị na huu na afọ ojuju.
ị maara nke ngwọta
dabara gị azụmahịa neesd
Kpọtụrụ anyị oru ngo J.Randall
Ahọrọ A-eme ka ọrụ
Na ọtụtụ ihe omume, na mgbakwunye na plastic akụkụ, e nwere alloy n'akụkụ, dị ka anyị nkịtị aluminum alloy, zinc alloy, titanium alloy, ndị a alloy akụkụ-mkpa ka a kpụzie. Iji nye ndị ahịa na mma ọrụ, anyị na-ike a ọkachamara na-anwụ-mgbatị anwụ otu na 2015. Ugbu a, anyị na-akwakọba ọgaranya ahụmahụ izute mkpa nke kasị ahịa.
Anyị merela agadi plastic Ọgwụ na ịkpụzi igwe na afọ ahụmahụ na Ọgwụ na ịkpụzi ụlọ ọrụ otu, na 2 QC technicians kwa nnofega. Anyị na-ezigakwa mbụ ogbe nke samples ndị ahịa nnyocha. QC anwale samples site CMM, projector, 2DMI, altimeter, ngọngọ nlele, agịga nlele, L-square, caliper, micrometer, ekweghị ekwe na ndị ọzọ na-ele ha ule akụrụngwa. Send quality akụkọ ahịa nnyocha, dị ka FAI, SPC, CPK, wdg All ọrụ anyị na-eme bụ nanị maka elu àgwà Chinese omenala injection ịkpụzi.
HKY akpụzi nwere ọtụtụ ahụmahụ na abụọ agba ọgwụ Ebu na n'usoro usoro, nke na-enye ohere maka ezi nhọrọ nke ngwaahịa na ụdị na-uzọ-ama ebe, na-eme na njikọ nke abụọ na agba mfe ọzọ ezi ezi. Ke adianade do, dị ka ndị ahịa chọrọ, anyị nwere ike nye nke abụọ roba ịkpụzi ọrụ.
A ọma e na nkenke arụpụtara ebu bụ isi ihe na oru oma na mmepụta nke ọma plastic akụkụ. HKY otu nwere ọgaranya ahụmahụ na nkenke ebu emebe, n'ichepụta niile ndị a afọ na-amụta, nke ka anyị na-eje ozi ahịa anyị na Ebu ụlọ maka na akụkụ na na mgbagwoju anya Ọdịdị na uko akụkụ chọrọ.
Ele ọrụ anyị
Ntak emi Họrọ HKY akpụzi
√ na anyị, ị nwere ike ịzọpụta oge na ego. Anyị bụ ndị factory, na-arụ ọrụ na anyị nwere ike izere ahia ọrụ
√ Anyị engineering otu nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ahụmahụ na oru ngo management nkà, dị ka nke ọma dị ka ezi oru English na oru oma nkwurịta okwu.
√ Ofụri Esịt izute gị àgwà ụkpụrụ, ihe niile ebu mmiri n'ihi na mbupụ Ebu na-arụpụtara dị na DME, HASCO ụkpụrụ, dị ka ndu mkpọ, bushings, thimbles ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
√ Banye a ndị na-abụghị ngosi nkwekọrịta (Non-ngosi Agreement) akwụkwọ iji chebe gị oru ngo ọmụma na anyị ga-eso gị data na ihe ọ bụla nke otu atọ ọzọ.
√ DFM (imewe manufacturability) analysis nke ọ bụla so na njirimara nke nwere ihe ize ndụ mbipụta (part imewe na ebu nsogbu) tupu akpụzi imewe na n'ichepụta
√ Dị ka ndị ahịa si 2D Eserese, niile Ebu na-ebu a ígwè akwụkwọ, okpomọkụ omume asambodo, ebu ule parameters na-ọnụ ọgụgụ n'ihe akụkọ.
√ Anyị nwere ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ na ebu imewe, Ọgwụ na ebu Ndinam, Two-agba ebu, Die Ife, Ọgwụ na ịkpụzi Manufacturing
√ Always nzaghachi ahịa anyị na-adọ ha n'ụzọ na-ekwurịta okwu dị ka ngwa ngwa dị ka ndị obodo suppliers
√ e kwenyere na ọtụtụ ahịa na Ọgwụ ebu oru ngo, nke ogide na dị iche iche ọrụ dị ka Automotive, Aerospace, Machinery, ngwa oru, Electronics, Packaging, Machinery, wdg
Address Room # 102, Building # 50, Shu Tianpu Xin XING Industry Mpaghara B, Matian Street, Guang Ming District, Shen Zhen obodo, Guang Dong Province, China, 518101
Ekwentị +86 075523573733
Biko ahapụ ozi ịkpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na e ọ bụla Omenala Ọgwụ akpụzi, Ọgwụ na ịkpụzi Ime oru mkpa ka a kwuru, anyị nnọchiteanya ga-kpọtụrụ gị na-adọ.
Omenala nkenke Plastic Ebu, Handle Shell Plastic Injection Molding, Plastic akpụzi Ọgwụ, Plastic Injection Moulding Components,